Mareykanka oo si dhow u eegaya ballanqaadkii Madaxweyne Farmaajo | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Mareykanka oo si dhow u eegaya ballanqaadkii Madaxweyne Farmaajo
Mareykanka oo si dhow u eegaya ballanqaadkii Madaxweyne Farmaajo
Xukuumadda Washington ayaa sheegtay inay si dhow u eegayso ballanqaadkii Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, ee ku aaddanaa inuu dib ugu laaban doono heshiiskii doorashooyinka dalka ee 17-kii September, isla-markaana uu si dhakhsi leh u bilaabi doono wadahadaladii ay dowladdiisu la laheyd Madaxda Dowlad Goboleedyada.
Bayaan ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa Madaxweynaha iyo Xildhibaanada Golaha Shacabka looga codsaday inay si deg-deg ahi u baabi’iyaan Sharciga gaarka ah ee labada sano loogu kordhiyay Hay’adaha Dowladda Federaalka.
“Waxaan ka codsanaynaa Madaxweynaha iyo Baarlamaanka inay si deg-deg ah uga hawlgalaan baabi’inta hindise sharciyadeedkii muddo kordhinta ee 12-kii April.” Ayaa lagu sheegay Bayaanka.
Bayaanka ayaa lagu taageeray diidmada ay muujiyeen Madaxweyne-yaasha Dowlad Goboleedyada iyo Ra’iisal Wasaaraha, ee la xiriiray muddo kordhinta.
“Waxaanu ka codsanaynaa Madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka inay si deg-deg ah u kulmaan, si loo dhameystiro qaabka doorasho ee leesku waafaqsan yahay, lana qabto doorashooyinka Baarlamaanka iyo Madaxtooyada sida ugu dhakhsiyaha badan, iyadoo lagu saleynayo heshiiskii September 17.” Ayaa lagu yiri bayaanka.
Dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday danleyda siyaasadda ee dalka inay danta Soomaalida awgeed meel iska dhigaan himilooyinkooda siyaasadeed iyo kala feker duwanaanshiyahooda, ayna si daacad ah oo tanaasul iyo shuruud la’aan ku jirto ay u wadahadlaan.
Mareykanka ayaa Ciidamada Dowladda Federaalka iyo xoogaga kale ee ka soo horjeeda ugu baaqay inay dib u gurtaan, isla-markaana ay fursad siiyaan wadahadalada, si ay dib ugu bilowdaan jewi ka caagan rabshado iyo caga-jugleyn.
Mareykanka oo si dhow u eegaya ballanqaadkii Madaxweyne Farmaajo was last modified: April 29th, 2021 by Admin
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Warfaafinta XFS oo Ka warbixiyey waxa Kasoo Baxay Kulankii RW Rooble & Midowga Musharixiinta
Joe Biden oo ka warbixiyay wixii u qabsoomay 100-kii maalmood ee ugu horreeyay xukunkiisa.
DFS oo sheegtay in xubno Al-shabaab ah ay ku dileen shabeellada dhexe
Soomaaliya oo qarka u saaran inay lumiso codkeeda Qaramada Midoobay
Sacuudiga oo dhimaaya dadka sanadkan xajinaya
Video:-DAAWO 30 QOF OO NAAFAHA OO LAGA kALA KEENEY DEGMADA BUURHAKABA IYO XAFADAHA Baydhabo QALABKA NAFAHA
China ” waxaa naga go’an in aan heer sare geyno xiriirka nagala dhaxeeya Soomaaliya